Izindaba - Fibc Bags Market
Imakethe Yezikhwama ze-Fibc
Isikhwama se-FIBC，isikhwama sejumbo，Izikhwama ezinkulu zisetshenziselwe uhla lwezimboni, ezolimo, ezemithi kanye neminye imikhiqizo. Kodwa-ke, kunokwanda okukhulu kwesidingo sezikhwama eziningi ngenxa yokwanda okuqhubekayo emikhakheni, njengamakhemikhali nomanyolo, ukudla, ukwakhiwa, ezemithi, ezezimayini, nokunye. Ngaphandle kwalokho, ukwanda kwamanani amabhizinisi nemikhakha yezokukhiqiza kunezela ezikhwameni eziningi ukukhula kwemakethe.
Izikhwama zenqwaba / zejumbo zivame ukuba ngefomethi engalukiwe enamandla aphezulu wokuqina nokuqina kwesimo sezulu. Zenzelwe ngokukhethekile ukunikeza ukuqina nokuthwala kwenqola ngokuphepha, yize zinamandla okuphatha ubuningi. Ukugxila okukhulayo kwabakhiqizi nabakhiqizi kuzisombululo ezisebenza kahle nezivikela kakhulu ukuthunyelwa kwezikhwama zenqwaba zamazwe omhlaba kanye nezasekhaya kungumgogodla ophambili odale ukwenyuka kwesidingo semakethe.
Imakethe idinga izixazululo zokupakisha ezingaphinde zisebenze, ziphinde zenziwe kabusha, futhi zingangcolisi umoya esikhundleni sezinkuni namakhadibhodi. Isidingo sokuvimbela ukulimala nokungcoliswa kwemithwalo ye-FIBC, amakhasimende agcizelele njengesidingo esikhulu, sikhuthaza abakhiqizi bezikhwama ngobuningi ukuthi basungule izixazululo ezintsha ngokwengxenye enkulu. Lezi zixazululo zingahlangabezana nezidingo zabakhiqizi abadinga ukuthi impahla yabo ifike ingalimele lapho iya khona, noma ngabe kuthuthwa ngaphakathi noma emhlabeni jikelele.
Kodwa-ke, ebhizinisini elingenazo izitsha, impahla eningi yakhula kakhulu ngo-2020, ikakhulukazi kumanyolo. Abasabalalisi banwebeka izindawo zokugcina izimpahla zikamanyolo, lapho bengaguqula khona impahla eningi babe izikhwama bese belayisha lezo zikhwama ezinqoleni zesitimela. Kwakukhona nokuthuthukiswa kwamandla ekukhiqizeni umanyolo. Ngenxa yalokho, imakethe yezikhwama ezinkulu ilinganiselwa ukufakaza ngamathuba emakethe aqinile ngokufunwa okwandayo.
Izitayela zakamuva ezibonwe emakethe yesikhwama senqwaba zifaka phakathi izikhwama zenqwaba eziyi-100% zokubola ezilahlekile nezisimeme ezidizayinelwe ukuletha amandla aqinile, aqinile, nokusetshenziswa okuningi.
Eminye imikhakha emikhulu yemboni ifaka ukuqwashisa okuphezulu ngezinzuzo zamandla aqine kakhulu nokumelana nesimo sezulu kanye nesidingo sokwandisa izindleko eziphelele zobunikazi eziholwa umncintiswano ongapheli kanye nengcindezi yemikhawulo. Futhi, ukwandisa ukuxhumana okuyinkimbinkimbi kwasendaweni, kwesifunda, nakwamanye amazwe okudinga uhla olubanzi lwezindlela zokuhamba kufakazela usayizi wemakethe.
Ngaphandle kwamathemba athembisayo, imakethe yezikhwama ngobuningi isafakazela izinselelo eziningana. Lezi zinto ezithikameza ukukhula zibandakanya imihlahlandlela eqinile kahulumeni mayelana nokusimama komkhiqizo kanye nezindleko eziphezulu ezidingekayo ukusetha izintambo zokukhiqiza ezizenzakalelayo. Futhi, isidingo sokuhlangabezana nezindinganiso ezahlukahlukene zokulawula kanye nemiyalo yamakhodi yokuphepha komkhiqizo kungungqondongqondo omkhulu emakethe.
Ukuhlaziywa kwemakethe yezikhwama ngobuningi kuhlukaniswe ngohlobo lwendwangu, amandla, umklamo, abasebenzisi bokugcina, nesifunda. Ingxenye yohlobo lwendwangu ihlukaniswe ngohlobo A, uhlobo B, uhlobo C, nohlobo D. Isigaba samandla sihlukaniswe saba sincane (kuze kufike ku-0.75 cu.m), siphakathi nendawo (0.75 kuye ku-1.5 cu.m), futhi kukhulu (ngenhla kuka-1.5 cu.m).
Ingxenye yomklamo ihlukaniswe yaba izikhwama ze-u-panel, amaphaneli amane asemaceleni, ama-baffles, isiyingi / amathebula, amakhona wokuwela, nokunye. Ingxenye yabasebenzisi bokugcina ihlukaniswe yaba ngamakhemikhali nomanyolo, ukudla, ukwakhiwa, imithi yokwelapha, izimayini nokunye.